VANOPONESA ZVIITIKO Archives - Tamban RELAY
Blueberries: mhinduro inoshanda yekukonana yakanangana nezera-kurasikirwa kwetsandanyama!
ALEXIS WAYAN Nyamavhuvhu 14, 2020 0
Kudya kwavo kwakapfumiswa nemabhurugwa, vatori vechikamu vakadya vakaenzana nemakombe 1,75 emabhuruku manyoro pazuva, muchimiro chakaomesesa-chakaomeswa bhuruu (19 g mangwanani uye 19 g manheru) kuwedzera pakudya kwavo ...
XNXX: Hezvino zvinhu gumi zveupenzi izvo vakadzi vanoita pamubhedha zvinovengwa nevarume!
Chinde Nyamavhuvhu 10, 2020 0
Ivo havazombofa vakatiudza asi varume havadi nezvikonzero zvedu zvese mumubhedha… 1. Patinopopota kwazvo zvinonzwika Kuratidza mafaro, ehe. Munhu wedu anogona kungobatwa kumeso kuziva kuti tiri kukwira ...
Alzheimer's: sei kuderedza njodzi?
ALEXIS WAYAN Nyamavhuvhu 7, 2020 0
Chirwere cheAlzheimer chine njodzi zvakanyanya nekuti, kuwedzera kupinza munhu mukunyongana nekutambudzika, zvinogadzirisa kwazvo avo vakamukomberedza. Pamberi pemunhu waunoda, waunogara naye zvese zvako…
Kuderedza Screen Screen Kunoderedza Njodzi Yekufa, Kudzidza Kuwana
bryamangwanabe Juil 25, 2020 0
Kuderedza Screen Nguva Kunoderedza Njodzi Yerufu, Kudzidza Kunowana Kuganhurisa Kutarisa TV Kunze Maawa maviri Zuva Rinogona Kudzivirira Kana Kutuma Hutano Hutano, Chidzidzo chitsva Njodzi dze ...
Heano zvakanakira dzimwe nguva kutsamwa
Heano zvakanakira dzimwe nguva kutsamwa Tinodzidziswa kuti kutsamwa kunobva mukutsamwa uye kunokuvadza. Asi zvinogona here - zvine mwero uye zvichitungamirirwa nenzira yakanaka - zvotiitira zvakanaka? ...
Heano maitiro ekurarama uine yakasimudzwa manzwiro
bryamangwanabe Juil 23, 2020 0
Heano maitiro ekurarama uine moyo wakakwirira manzwiro Iwe unonzwa kunge iwe unotakura manzwiro ako semutoro nekuti ivo vanogona kuva vakanyanya? Iwe unogona kunge uri hypersensitive. Tsananguro! Kana munhu wese aine manzwiro dzimwe nguva ...
Iwe unonetseka nekurwara kwenguva refu here? Ikozvino kune shanduko rubatsiro kwauri.
bryamangwanabe Juil 22, 2020 0
Iwe unonetseka nekurwara kwenguva refu here? Ikozvino kune shanduko rubatsiro kwauri. Mamirioni avanhu anozviziva - snging. Boredom nhamba imwe mubedheni usiku. Inenge imwechete muaviri varume uye ...
Iyo yakanyanya kushanda uye isingadhuri kurwisa-pimple kurapwa
bryamangwanabe Juil 19, 2020 0
Iyo yakanyatsoshanda uye isingadhuri kurwisa-pimple kurapwa Pasinei iwe uine yakanyanya kunaka nzira tsika kurapa acne yako, kana pimple ikangoerekana yaoneka, iwe unoda chimwe chinhu chinoshanda. Kurapa kwenzvimbo ...
Hezvino zvinhu zvishanu zvekuziva usati watora zano rekudya online
bryamangwanabe Juil 18, 2020 0
Hezvino zvinhu zvishanu zvekuziva usati watora zano rekudya online online Influencer ads pamawebhusaiti, zvemagariro enhau uye mumapurogiramu akatungamira kune inopfuura kotara yezvichemo zvakaiswa ...
Kudya kwako kunogona kukanganisa hutano hwako hwepfungwa here?
Kudya kwako kungaite kukanganisa hutano hwako Iwe ungangofungidzira 2020 ichipararira zvakasiyana nenzira yayaiita. Uye sezvo nyika zvachinja zvakanyanya, zvinogona kuti ...